Zlatan Ibrahimovic oo heshiis cusub u saxiixaya kooxdiisa Manchester United – Meeqa sano ayuu sii joogayaa? | Saxil News Network
Zlatan Ibrahimovic oo heshiis cusub u saxiixaya kooxdiisa Manchester United – Meeqa sano ayuu sii joogayaa?
Sida wararku ay sheegayaan Zlatan Ibrahimovic ayaa la soo warinayaa inuu saxiixi doono heshiis cusub oo kooxdiisa Manchester United ku sii hayn doona illaa sanadka 2019-ka.
36-sano jirkaan ayaa u soo dhaqaaqay garoonka Old Trafford sanadkii 2016, isagoo markaas u saxiixay heshiis hal sano ah oo uu dooq u haysto inuu ku darsan karo 12 bilood oo dheeraad ah, laakiin Man United ayaa go’aansatay inay waqti dheer sugto kaddib markii weeraryahanka uu dhaawac jilibka ka soo gaaray bishii April.
Xiddiga reer Sweden ayaa si dhaqso ah uga soo kabsaday dhaawacaas, si kastaba, waxa uu qandaraas cusub oo hal sano ah u saxiixay Man United bishii August ka hor inta uusan dib ugu soo laabanin horraantii bishaan.
Sida ay warinayso The Sun Ibrahimovic ayaa qorsheynayey inuu isaga tago kooxda Jose Mourinho ka hor inta uusan ciyaarihiisa ku soo gabagabaynin horyaalka MLS-ka Mareykanka, laakiin hadda waxa uu wadahadallo heshiiska uu ku kordhinayo kula jiraa tababaraha, maadaama uu si joogto ah u joogo.
Wargeyska ayaa sheegaya in ciyaaryahanka uu ka warqabo inuu kubada cagta ka maqnaa muddo, “Sidoo kale wuxuu doonayaa inuu ku guuleysto horyaalka Premier League” ka hor inta uusan ka fariisan ciyaaraha, halka Mourinho uu horey u sheegay in Ibrahimovic uu sii wadi karo ciyaarista kubadda cagta da’ahaan 40 jir.
Ibrahimovic ayaa afar kulan u saftay Man United tan iyo markii uu ku soo laabtay oo uu dhaawaca ka yimid, dhammaantoodna Kursiga Keydka ayuu ka soo kacay.